Izinto zangaphandle ezingezinhle: ukuthi ziyini, izici nemiphumela | Green Renewables
IsiJalimane Portillo | 12/05/2022 12:00 | Imvelo
Ingaphandle elibi libhekisela kuzo zonke izinhlobo zemiphumela eyingozi emphakathini, ekhiqizwa imisebenzi yokukhiqiza noma yokusetshenziswa, engekho ezindlekweni zabo. Ezemvelo, abantu kanye nezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo izinto zangaphandle ezingezinhle Kubaluleke kakhulu ukuhlaziya.
Ngalesi sizathu, sizonikezela lesi sihloko ukuze sikutshele ukuthi yiziphi izinto zangaphandle ezingezinhle, izici zazo kanye nemiphumela eyinhloko yendawo ezungezile.
1 Yiziphi izinto zangaphandle ezingezinhle
1.1 ingaphandle elihle
3 Izibonelo zezinto zangaphandle ezingezinhle
Yiziphi izinto zangaphandle ezingezinhle
Singachaza izinto zangaphandle njengaleyo miphumela yesibili ebangelwa umsebenzi womuntu noma inkampani engenasibopho sayo yonke imiphumela yezenhlalo noma yemvelo yalowo msebenzi.
Ngokuvamile, kunezinhlobo ezimbili zezinto zangaphandle, ezinhle nezingezinhle, esizokwandisa ngazo ngezansi. Ukuyiqonda kangcono: Isibonelo esicacile sesimo sangaphandle esihle ukungcola okukhiqizwa yimboni endaweni ezungezile uma ikhiqiza izimoto. Le nkampani inesibopho sokutholwa kwezinto zokwakha, ukuguqulwa zibe izimoto nokudayiswa, kodwa uma kubhekwa izinto zangaphandle ezingezinhle zale misebenzi, kungenzeka ukuthi yasebenzisa imishini engcolisa kakhulu inqubo yokukhiqiza, okunemiphumela emibi kakhulu emvelweni.
Izinto zangaphandle ezinhle ziyizo zonke imiphumela emihle yemisebenzi yamalungu omphakathi, hhayi ngokungacacile ezindlekweni noma ezinzuzweni zaleyo misebenzi. Incazelo yesimo sangaphandle esihle kungagcini kunoma yimuphi umkhakha noma isayensi, ihlanganisa yonke imiphumela emihle, emikhulu nemincane, izenzo zanoma yimuphi umuntu noma inkampani ezingaba nayo emphakathini wethu.
Sikhuluma ngemiphumela emihle engafakiwe ezindlekweni zokukhiqiza noma amanani okuthenga, kodwa engaba nemiphumela enenzuzo kakhulu emphakathini uwonke. Ukutshalwa kwezimali kwezibhedlela namalabhorethri ukuthola amakhambi ezifo ezithile kuyisibonelo salokhu. Ekuqaleni, umuntu angase acabange ukuthi lokhu ukuzibophezela I-R&D ingabiza kakhulu uma abacwaningi bengalitholi ikhambi ngokushesha.
Iqiniso lisitshela okuphambene kakhulu, ukuthi lolu hlobo lomsebenzi ludingeka kakhulu enhlalakahleni nempilo yabantu, ngoba maduze nje kuzotholakala umuthi onciphisa imiphumela yesifo esihlobene. Lo muthi, okuzothatha isikhathi ukuwuthola, wengezwe ekutshalweni kwezimali okukhulu kwezomnotho, uzoba nesimo sangaphandle esihle kakhulu emphakathini ngokusindisa izinkulungwane zezimpilo, kodwa lokhu akubonakali ekuphenyweni okwenziwe futhi okubhekene nesikhathi eside.
Ngokungafani nesimo sangaphandle esihle, isimo sangaphandle esingesihle siwumphumela wokwenza noma yimuphi umsebenzi olimaza umphakathi, ongavezwa izindleko zawo. Nakuba sibhekene nemibono evela emkhakheni wezomnotho, le miqondo ingadluliselwa kunoma iyiphi indawo yokuphila kwansuku zonke.
Isibonelo esihle sesimo sangaphandle esingesihle ukungcoliswa kwemvelo, ikakhulukazi izimboni, yizinkampani ezinkulu. Cabanga ngenkampani enkulu yezimayini esebenza ngokumbiwa nokulungisa amalahle. Lapho bekala izindleko zokwenza umsebenzi othile, ababheki izinga eliphezulu lokungcola okuzobangela imvelo. Lokhu kubhekwa njengento yangaphandle engalungile futhi Kungumphumela wenqubo yokukhiqiza yenkampani. futhi akubonakali enanini lokuthengisa noma ezindlekweni zokukhiqiza amalahle.
Uma sima futhi sicabange, cishe zonke izenzo zinezinto zangaphandle ezingezinhle emphakathini. Isibonelo, ukusetshenziswa kukagwayi kunemiphumela emibi eyingozi empilweni yomsebenzisi, kodwa kudala izinto zangaphandle ezingezinhle njengokwehla kwezinga lengqalasizinda (uma umuntu ebhema ekamelweni, izindonga zingashintsha umbala futhi zilimale intuthu), futhi kungase kube nomthelela omubi empilweni yomuntu (iziguli ezinesifuba somoya ezihogela intuthu kagwayi).
Thela izinkampani ezingcolisa kakhulu intela ukuze zikhuthaze ukusetshenziswa kwamandla avuselelekayo kanye nezinqubo zokukhiqiza ezisimeme.
Nikeza ngezimali zocwaningo nentuthuko, ikakhulukazi emikhakheni yesayensi nezokwelapha.
Ingaphandle, kungaba kuhle noma kubi, azikho kuphela emkhakheni wezomnotho womphakathi. Noma yiluphi uhlobo lokuziphatha, njengokubhema noma ukuphonsa ipulasitiki eceleni komgwaqo, kungaba nemiphumela emfushane/yesikhathi eside emphakathini, okungaba kubi noma kube kuhle, kuye ngokuziphatha.
Izibonelo zezinto zangaphandle ezingezinhle
Ake sicabange ngakho, zonke izenzo zethu, kungakhathaliseki ukuthi zingaba mincane kangakanani kithi, zinomthelela kubo bonke abanye abantu abakha umphakathi wethu.
Izinto zangaphandle ezingezinhle zivela lapho izenzo ezinjalo sithatha njengezinkampani, abantu ngabanye noma imindeni kumsebenzi othile unemiphumela eyingozi yesibili kubantu besithathu. Le miphumela ayifakiwe ezindlekweni eziphelele. Imiphumela engemihle ngokugcizelelwa ayikho ekukhiqizeni noma emananini ezinsiza zomphakathi ngesikhathi sokusetshenziswa.
Izinto zangaphandle ezingezinhle, njengezinto zangaphandle ezinhle, Ziwumqondo wezomnotho. Kodwa kufanele kuqashelwe ukuthi lezi zingasetshenziswa ngokulinganayo ngaphandle kwezwe lezomnotho. Ngakho-ke, akukhona nje kuphela imisebenzi yezomnotho eyenza izinto zangaphandle, kodwa naleyo misebenzi ebonakala njengengeyona eyomnotho.
Izinto zangaphandle ziyabonwa kanye nemiphumela eqondile engekho enanini elikhokhelwe ukukhiqizwa, ukusetshenziswa noma ukusetshenziswa.
Izibonelo zezinto zangaphandle ezingezinhle ezinikezwe ngezansi zingasisiza ukujulisa ukuqonda kwethu izinto ezinjalo zangaphandle. Siyazi ukuthi imithombo yezinto zangaphandle ezingezinhle ingapheli. Nokho, njengesibonelo, singabhekisela kokulandelayo.
imfucuza enemisebe njll
umsindo wenjini uphezulu kakhulu
Kungacatshangwa ukuthi ingaphandle elibi liwuchungechunge olukhulu lwezenzo kanye nemithelela enezindleko.
Ngithemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nezinto zangaphandle ezingezinhle nezici zazo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuvuselelwa Okuhlaza » Imvelo » izinto zangaphandle ezingezinhle